Alshabaab oo saddex ruux ku toogtay degmada Buulo Mareer ee Sh.Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Buulo-mareer – Mareeg.com: Alshabaab ayaa shalay galaba fagaara ku yaal degmada Buula Mareer ee gobolka Shabeelaha ku toogtay saddex qof oo ay ku eedeeyeen jaasuusnimo iyo in ay la shaqeynayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlado kale oo shisheeye.
Dadka la toogtay waxey Alshabaab ku kala sheegeen iney kala ahaayeen:
1- Cali Isxaaq Cabdi oo 24 sano jir ah, waxey ninkaas Alshabaab inuu la shaqeynayay ciidamada amaanka dowladda Soomaaliya, islamarkaana uu dhowr qof gacan geliyay.
2- Cusmaan Mahdi Cusmaan oo 33 sano jir ah, ninkaan waxaa Alshabaab ku eedeeyeen inuu u sharraxnaa gudoomiye ku xigeenka degmada Qoryooley, halkaasoo ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM gacanta ku hayaan.
3- Bareele Macalin C/raxmaan oo 31 sanajir ah, waxaa Alshabaab sheegeen iney ku heleen fal jaasuusnimo, waxeyna sheegeen inuu ka yimid dhanka dhulka Soomaali-galbeed ee Itoobiya hoostaga, uuna xubin ka ahaa ciidanka Liyuu Booliska.
Madaxa Alshabaab u qaabilsan Shabeelaha Hoose, Abuu Cabdalla oo ka hadlay goobta raggaan lagu toogtay ayaa sheegay iney dili doonaan qof kasta oo ay ku helaan falalka nuucaan ah.
Bartamihii bishaan May 2014, Alshabaab ayaa dil toogasho ah ku fuliyeen nin ka mid ahaa dadka degmada Baaradheere ee gobolka Gedo.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo ka hadlay qaraxyo ka dhacay Hargeysa